SMSC Development | Lọ Akwụkwọ Oakleigh na Early Early Intervention Center
Kwalite Mmụọ Nsọ, Omume, mmekọrịta mmadụ na ọdịbendị nke ụmụ akwụkwọ anyị
Nkwalite mmekọrịta ọha na eze
Ihe SMSC rụpụtara na Oakleigh na Acorn ' (PDF Akwụkwọ)
Participatemụaka na-esonye na Mmụta Okpukpe ebe ha na-enyocha njirimara okpukpe na nke ime mmụọ ha, yana nke ụmụ klas ha. Usoro ọmụmụ RE na-egosipụta ọdịiche dị iche iche nke okpukpe nke ụlọ akwụkwọ na ụwa yana ịmara na iji ndị na-anọghị n'okpukpe kpọrọ ihe.
Anyị na-eme ahụmịhe dị ịrịba ama dịka ụbọchị ọmụmụ na ememme ma hụ na ụmụaka nwere ohere ịnwe mmetụta pụrụ iche na nke bara uru. A na-akpọ ezinụlọ ka ha kee anyị oge dị mkpa site na iji akwụkwọ ụlọ akwụkwọ, kaadị post post, kamera agbaziri na teknụzụ ndị ọzọ.
Anyị na-ekepụta ohere ebe ụmụaka nwere ike igosipụta ọationụ na anụrị nke ụwa ekepụtara na imepụta ma zụlite mmata nke ụwa na ikike ya iji kpalie ụjọ na ịtụnanya.
Anyị na-enye ụmụaka ohere igosipụta mmetụta nke mmetụta na mmetụta nke ndị ọzọ kwupụtara na ịkwanyere mmetụta na ụkpụrụ ndị ọzọ ùgwù.
Anyị na-eme atụmatụ oge maka ụmụaka ka ha soro na ohere iji dị jụụ ma na-atụgharị uche.
Anyị na-akwado ụmụaka ka ha jiri echiche na okike na mmụta ha.
Anyị na-agba ụmụaka ume imeghachi omume kwesịrị ekwesị na mkpa na mmetụta nke ndị ọzọ ma na-egosi nchebara echiche na obiọma na ndị ọzọ.
Anyị na-ewepụta ohere maka ụmụaka ka ha mụta ihe n'aka ndị ezigbo ụdị omume dị mma.
Anyi na akuziri umuaka ka ha na ekwurita okwu n’uzo ga enyere ha aka inwe ezi mmeko ma nwe obi uto isonye na ulo akwukwo na ndu obodo.
Anyị na-enye ọtụtụ ihe omume nke na-etolite mmekọrịta mmekọrịta ụmụaka na nghọta ha, dịka otu esi elekọta ndị mmadụ, ihe ndị dị ndụ, ihe onwunwe na gburugburu ebe obibi.
Anyị na-akụziri ụmụaka ịrụkọ ọrụ ọnụ dịka ndị otu otu ma ọ bụ otu, na-atụgharị ibe ha ma na -ekere òkè n'etiti ọnọdụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Anyị na-ewepụta ohere maka ụmụaka ka ha na ndị ọgbọ ha na ndị okenye nwee mmekọrịta dị mma, gụnyere ndị nwere mkpa dị iche iche.
Anyị na-eme emume ọdịbendị ọdịnala nke ibe anyị ma na-akuziri ụmụaka ka ha jiri ihe nketa ọdịnala ha kpọrọ ihe ma zụlite njirimara, njirimara onwe onye, ​​na ịkwanyere ugwu na nkwanye ugwu ndị ọzọ ùgwù
Anyị na-agba ụmụaka ume isonye, ​​ma zaghachi n'ụzọ dị mma n'ọtụtụ ọrụ nka, egwu, egwuregwu, mgbakọ na mwepụ, teknụzụ, sayensị na omenala.
Anyị na-enye ụmụaka ohere iji nweta ma zaghachi nke ọma n'asụsụ, nri, egwu, ihe mgbe ochie na omume ọdịbendị nke obodo dị iche iche.
Anyị na-agba ụmụaka ume igosipụta mmasị na ịgagharị ọdịbendị dịgasị iche iche ma gosipụta nzaghachi ziri ezi nye okpukpe dị iche iche, agbụrụ na mmekọrịta akụ na ụba na mpaghara, obodo na nke ụwa.